Vidio ny Poco F2 Pro: antony anaovana azy io rehefa mahatratra ny tsena | Androidsis
Nerea Pereira | | Android Android
Omaly dia nanambara ny fahatongavan'ilay titan vaovao avy amin'ny sampana Xiaomi. Raha izy Little F2 Pro Efa ofisialy io, maodely tonga ho lasa mpamono sainam-pirenena vaovao. Ny fitaovam-piadian'izy ireo? Famolavolana tena manintona, ankoatry ny fiasa izay manandratra azy eo an-tampon'ny sehatra. Ary mitandrema, izany rehetra izany amin'ny vidin'ny fandravana.
Fa tena mendrika izany mividy ny Poco F2 Pro? Mbola mieritreritra ianao fa afaka mahita vahaolana tsara kokoa, na ny sainam-by marika toa ny Samsung na Huawei dia mendrika vidy kokoa.
1 Aza misalasala mividy ny Poco F2 Pro raha mitady telefaona milalao ianao
2 Batterie mammoth
3 Vidim-pananahana, antony lehibe hividianana ny Poco F2 Pro
Aza misalasala mividy ny Poco F2 Pro raha mitady telefaona milalao ianao
Ny zana-bolan'ny Xiaomi dia nikarakara na dia ny tsipiriany kely indrindra aza mba hanaovana fiovana amin'ny mpifaninana aminy. Ary ny iray amin'ireo singa mahaliana indrindra dia miaraka amin'ny rafitra fanamafisana ranoka. Eny, ny Poco F2 Pro dia miloka amin'ny fitaovana tsara indrindra eny an-tsena. Ny olana dia ny fampiasana tsy tapaka ny lalao izay mitaky enta-mavesatra be, indrindra amin'ny terminal misy vatana vita amin'ny aliminioma, dia mety ho baomba mandalo fotoana.
Fa Pocophone dia nahita ny vahaolana: rafitra feno an'ny vata fampangatsiahana ranon-javatra, tohanan'ny sosona grafita marobe, izay mamela ny telefaona tsy hijaly amin'ny olana ara-pananahana. Amin'izany fomba izany dia afaka milalao Fortnite mandritra ny ora maro ianao nefa tsy manahy na inona na inona.
Ary koa, mahita ny toetra ara-teknika Avy amin'ity terminal ity dia mazava fa raha te hividy ny Poco F2 Pro hilalao ianao dia tsy handiso fanantenana anao mihitsy.
SCREEN 6.67-inch AMOLED miaraka amin'ny vahaolana Full HD + - tahan'ny santionany 180 Hz - famirapiratana 1.200 nits - HDR10 + - Gorilla Glass 5
TOERANA FITONDRANA AN-TANY 128 / 256 GB UFS 3.0
CAMERAS REAR 686 MP Sony IMX64 Main Sensor - 5 MP Telemacro Sensor - 2 MP halalin'ny sensor
CAMERA HATRANY MP 20 miaraka amin'ny mekanisma pop-up
BATERA 4.700 mAh misy fiampangana haingana 33W
RAFITRA FIKIRAKIRANA Android 10 miaraka amin'ny interface Poco Launcher 2.0
CONNECTIVITY 5G - WiFi 6 - Super Bluetooth 5.0 - GPS roa - USB-C - NFC - Jack kely - IR Blaster
ASA hafa Mpamaky tanan-tànana eo amin'ny efijery - Fangatsiahana rano
Saingy mazava ho azy, inona no fampiasana ireo fiasa mahery vaika toy izany raha tsy maharitra mandritra ny tontolo andro ny terminal? Izany no antony mahatonga ny antony faharoa mahatonga ny fividianana ny Poco F2 Pro dia fahombiazana tanteraka.
Araka ny hitanao amin'ny sary izay mitarika ireo andalana ireo, ny mpanamboatra Aziatika dia nisafidy modely iray miaraka aminy 4.700 mAh, mihoatra ny ampy hanolorana fahaleovan-tena tena tsara. Ho fanampin'izany, ny efijery an'ny PocoPhone F2 Pro dia manana vahaolana Full HD +, izay mamonjy loharanon-karena raha oharina amin'ireo takelaka QHD.
Ary ahoana ny amin'ny fahatongavan'ny Android 10, izay manatsara ny fahombiazan'ny angovo, ampiana amin'ny fitantanana loharano feno natolotry ny processeur Snapdragon 865, dia nanao cocktail tonga lafatra izy ireo mba haharetan'ny bateria Poco F2 Pro maharitra roa andro. Antsipiriany lehibe iray izay mahatonga ny fahasamihafana raha oharina amin'ireo mpifaninana aminy.
Vidim-pananahana, antony lehibe hividianana ny Poco F2 Pro
Ny gilasy amin'ny mofomamy amin'ny vokatra boribory tsotra dia kely ny vidiny. Ary, azonao atao ny mividy ny Poco F2 Po amin'ny RAM 6 GB sy fitehirizana 128 GB raha ny marina 549 euros. Eny, tena misy ny fampiroboroboana mifarana amin'ny 15 Mey ary ahafahanao mitahiry 50 euro, saingy mbola vidiny fandravana io.
Tsarovy fa ity maodely ity dia misy fanohanana ireo tambajotra 5G, ary rehefa jerena ny mampiavaka azy ara-teknika dia mazava fa ny Poco F2 Pro dia terminal manana fiainana mahasoa farafahakeliny 3 na 4 taona. Noho izany, ny fahitana fa ao anatin'io elanelam-bidiny io dia tsy misy mpifaninana aminy izay manakaiky azy eo amin'ny lafiny fampisehoana dia mazava fa tsy ho diso ny fividianana ity terminal ity. Ary inona ny mahasamihafa azy amin'ny Samsung Galaxy S20 ohatra? Amin'ny ankapobeny ny famahana ny efijery, ny famahanana tsy misy tariby, ny fanoherana ny rano ary ny fizarana sary.
Ankoatr'izay, rehefa jerena fa any Espana dia tonga ilay maodely miaraka amina processeur Exynos, kely lavitra noho ny vatosoa ao amin'ny satroboninahitr'i Qualcomm, dia ny Poco F2 Pro no hanolotra fampisehoana tsaratsara kokoa ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Android Android » Antony 3 hividianana ny Poco F2 Pro
Navoakan'ny HMD Global tamin'ny farany ny Android 10 ho an'ny Nokia 3.1 Plus
Alternative 4 tena tsara amin'ny kitendry Microsoft SwiftKey